Maalinta: Diseembar 5, 2019
Cusboonaysiinta Dhismaha Terminalka Dhismaha Terminalka Dhismaha Terminal ee Dhismaha Madaama ay sabab u tahay qandaraaska guud ee Hay'adda Duulista Hawada Gobolka (TCDD) 2019 / 575301 GCC xaddid qiime 22.205.909,39 TL iyo qiyaasta qiimaha 29.591.926,00 TL Siirt [More ...]
Gawaarida Magaalada Sakarya waxaa loo daabumaayaa Gaadiidka Caafimaadka leh; Dowladda Hoose ee Magaalada Sakarya waxay sii wadaysaa nadiifinta joogtada ah ee gawaarida gaadiidka dadweynaha. Hadal qoraal ah oo uu soo saaray agaasinka gaadiidka dadweynaha. [More ...]
Muuqaal cusub ayaa lagu soo bandhigay kiosiyadaha Kart54. Muuqaalkan cusub, Kaarka buuxa waxaa laga iibsan karaa meelaha buuxu. Kala duwanaanshaha magaalada ee '10' oo ay leedahay Waaxda Gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Magaalada Sakarya [More ...]
Jaamacadda Karamanoğlu Mehmetbey waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha tacliinta; Agaasinka Jaamacada Karamanoğlu Mehmetbey waaxyaha soosocda, 2547 ayaa tiriyey sharciga tacliinta sare iyo magacaabida xubnaha kuliyada iyadoo la raacayo qodobada laxiriira ee Xeerka. [More ...]
Ka dib tareenka Istanbul, oo loo keenay ajandaha dhibaatada kheyraadka iyo burburka, indhaha ayaa loo rogay mashaariicaha metrooga socda ee dalka oo dhan. Dowlada hoose ee CHP Mersin ayaa raadineysa amaahda loogu talagalay mitirka magaalada Bursa iyo Kocaeli metro [More ...]
Duqa Magaalada Konya ee Magaalada Caasimada ah Ugur Ibrahim Altay, oo la kulmay xubno ka tirsan saxaafada Magaalada Konya ayaa ka hadlay ajandaha. Duqa Magaalada Konyaabolis Uğur İbrahim Altay, oo uu weheliyo wakiillo ka socda ururrada saxaafadda maxalliga ah iyo kuwa qaran [More ...]
Gudaha Xarunta Tareenka ee Haydarpaşa Markii ugu Horaysay; 2010, shaqada dib u soo celinta ee Xarunta tareenka ee Haydarpaşa, oo dab ku qabsaday saqafka oo uu waxyeelo gaadhay, ayaa la dhammeystirey illaa xad weyn. TRT markii ugu horeysay xaaladdii ugu dambeysay ee dhismaha saldhiga [More ...]
Jadwalka Khidmadaha Gawaarida Gaarka ah ee Bursa Uludağ Saacadaha Shaqada iyo Khidmadaha Gawaarida Gaariga 2019; Ski qaadaa Bursa, Turkey ee line koowaad ee gaariga cable. 29 Oktoobar Wuxuu Furay 1963. Mid ka mid ah astaamaha magaalada ee Bursa, Bursa Teleferik [More ...]
Turkey ayaa wajahaya fursad weyn in industry baaskiilka: e-Baaskiilada. Baahida loo qabo elektaroonigga, oo sidoo kale loo yaqaanno “baaskiil ku shaqeeya korantada adduunka, si dhakhso ah ayuu u korayaa. Turkey sababta e-Baaskiilada ee qeybiyeyaasha weyn ee dalalka Yurub [More ...]
Dareenka Wadayaasha ..! Anatolian Motorway 5-20 ayaa la xirayaa bisha Diseembar; Qeybta Isgoyska Izmit East Junction-Adapazari ee wadada 'Anatolian Motorway' ee jihada Ankara, sababtuna waa dayactirka qaab dhismeedka iyo dayactirka howsha 5-20 Diseembar Diseembar 08.00-18.00 [More ...]